देउवालाई दिल्लीमा राजकीय सम्मान
काठमाडौं, ८ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विशेष राजकीय सम्मान गार्ड अफ अनर प्रदान गरेको छ ।
भाद्र ८, राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा०ले स्थानीय तह तेस्रो चरणको निर्वाचनसहित सबै निर्वाचनमा भाग लिने भएको छ ।
काठमाडौँ, ६ भदौ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको २५ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा गोविन्द आचार्यसहित ४७ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको छ ।
३१ वर्षे रहबर वीरगन्ज महानगरमा माओवादी मेयर उम्मेदवार
काठमाडौं, भदौ ६ नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा ३१ वर्षे मुस्लिम युवा रहबर अन्सारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
भिखारी संघ अध्यक्षको घरमा तीन लाख
विराटनगर, ५ भदौ । डुबानमा परेका भिखारी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मण्डलको घरबाट रु तीन लाख १५ हजार रकम फेला परेको छ ।
को बन्लान पत्रकार महासंघको सभापति
काठमाडौं, ४ भदौ । नेपाली पत्रकारीताको इतिहास गर्व गर्न लायक छ । नेपाली पत्रकारहरुले हरेक परिवर्तनकारी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् ।
कांग्रेसका उम्मेदवार यादवद्वारा बाढी पिडीत परिवारलाई राहत वितरण
बारा ४ भदौ महागढीमाई नगरपालिका बरियारपुरका नेपाली कांग्रेसका मेयरका उम्मेदवार उपेन्द्र यादव (उपन) नेतृत्वको टोलीले बाढी पिडीत परिवारलाई राहत वितरण कार्यमा जुटेकाछन ।
काठमाडौँ, ४ भदौ । नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औँ महाधिवेशन आइतबारदेखि काडमाडौँमा सुरु हुँदैछ ।
पर्सा सुन चादी ब्यवसायी संघ द्धारा प्रहरी र संचारकर्मी सम्मानित
पर्सा सुन चादी ब्यवसायी संघले आज एक कार्यक्रम बिच बीरगंजको ३ प्रहरी र दुई संचारकर्मी र एक जना कानुन बिदलाई सम्मानित गरेको छ ।
राजपा नेपालका नगर अध्यक्ष द्धारा बीरगंज १७ अलौमा बाटो मर्मत गरे
बीरगंज २ भदौ करिव एक हप्ता पहिला आएको बाढीका कारण पर्सामा बाढीले सडक बगाउनुका साथै करौडोको क्षेती पुरयाएपछी अहिले राजपा नेपाल सडक मर्मत लागेको छ ।
सप्तरीमा बाढीले झण्डै २० हजार घरका एक लाख व्यक्ति प्रभावित
सप्तरीमा एक हप्ता अगाडि अविरल वर्षासँगै विभिन्न नदी तथा खोलामा आएको बाढीले झण्डै २० हजार घरका एक लाख व्यक्ति प्रभावित भएका छन् ।
रोटरी क्लव अफ बीरगंज द्धारा पर्सामा बाढी पिढितहरुलाई राहत बितरण
बीरगं ३२ श्रावण रोटरी क्लव अफ बीरगंज मेट्रोपोलिस द्धारा पर्साको बिभिन्न गाउ टोलहरुमा राहत बितरण शुरु गरेको छ । रोटरी क्लवका सर्विस प्रोजेक्ट डाईरेकटर रोटेरियन एवम माओवादीका युवा चर्चित नेता रहवर अन्सारीको नेतृत्वमा गएको टोलीले पर्साको पर्साको बिभिन्न गाउ टोलहरुमा राहत बितरण कार्य शुरु गरेको छ ।
नेपाली काग्रेस पर्सा द्धारा एक दिनमा करिव २ लाख भन्दा बढी राहत संकलन
बीरगं ३० श्रावण नेपाली काग्रेस पर्साले आज देखी बीरगंजमा बाढी पिडितहरुका लागी राहत संकलन कार्य शुरु गरेको छ । पाच दिन देखी परेको अविरल वर्षाका कारण बाढीले बीरगंज नगर लगायत पर्साका करिव ५ सय भन्दा बढी घरहरु डुवानमा परेपछी बाढी पिडितहरुका लागी राहत संकलन नेपाली काग्रेस जिल्ला कार्य समिती पर्साका कोषाध्यक्ष ईम्तेयाज आलमको नेतृत्वमा बीरगंजको घण्टाघरमा आज देखी शुरु गरेको हो । बाढी पिडितहरुका लागी नेपाली काग्रेस पर्साले आफनै सांसद देखी कार्यकर्ताहरु संग करिव २ लाख रुपैया भन्दा बढी नगद संकलन गरेको दिलिप राज कार्कीले जनाएकाछन ।
एमाले द्धारा बीरगंज माहानगरपालिकाका बाढी पिढितहरुलाई राहत वितरण
बीरगंज ३० श्रावण ने.क.पा एमाले विरगंज महानगरपालिका का मेयर का प्रस्तावित उम्मेदवार बसरुद्दिन अन्सारी र उप–मेयरका प्रस्तावित उम्मेदवार सोफीया आचार्य को टोली द्धारा बाढि पिडितहरु लाई राहत समाग्री वितरण गरिएको छ । विरगंज महानगरपालिका मा अबिरल वर्षा को कारणले करिव ५ सय भन्दा घर डुबानमा परेपछी स्थानीयहरु बिस्थापीत भएकाहरुलाई ने.क.पा एमाले का जिल्ला लगायत का कार्यकर्ताहरुले राहत समाग्री एकसाथ वितरण गरेका छन् ।
फोरम र माओवादी केन्द्र द्धारा पर्साको छुट्टा छुट्टै स्थानमा रात बितरण
बीरगं ३० श्रावण संघिय समाजवादी फोरमले आज पर्साका बाढी पिडितहरुलाई राहत वितरण गरेको छ । पाच दिन देखी परको अविरल बर्षाका कारण पर्सा जिल्लाका करिव ५ सय भन्दा बढी घरहरु डुवानमा परेपछी फोरम नेपालले आज करिव १ लाख ५० हजार रुपैया बराबरको साधान्य ५ सय परिवारलाई बितरण गरेको हो । फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य हरिनारायण रौनियारको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज बाढी पिडितहरुलाई उक्त रकम बराबरको खानेकुराहरु बितरण गरेको हो ।
बीरगंज नगर लगायत पर्साको ग्रामिण क्षेत्र डुवानमा लाखौको क्षेती राहत पुग्न सकेन
बीरगंज २९ श्रावण पाच दिन देखी परको अविरल बर्षाका कारण बीरगंज नगर लगायत पर्साको ग्रामिण क्षेत्र डुवानमा पर्नुको साथै यहाको जनजिवन नराम्रो संग प्रभावित भएको छ । लगातार परेको अविरल बर्षाको कारण बीरगंज माहानगरपालिकाको बिभिन्न करिव १० वटा वडा लगायत ग्रामिण भेगहरुमा रहेको घरहरु डुवानमा परेको हो ।
विराटनगर, २८ साउन । निरन्तररुपमा गएरातिदेखि बर्षा जारी रहेको कारणले मोरङमा अन्दाजी दुई हजार घर डुवानमा परेको छ । बर्षाका कारण विराटनगर विमानस्थलमा दुई फिट पानी जमेपछि हवाईसेवा अवरुद्ध भएको छ र विमानस्थलको सुरक्षागार्डको भवनमा समेत पानी पसेपछि कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको १९ वटै वडाका अधिकांशको घरमा पानी पसेको छ ।
लगातार चार दिन देखी परको अविरल बर्षाका कारण बीरगंज लगायत पर्सा जिल्ला डुवान
बीरगंज २८ श्रावण चार दिन देखी परको अविरल बर्षाका कारण बीरगंज नगर लगायत पर्साको ग्रामिण क्षेत्र डुवानमा पर्नुको साथै यहाको जनजिवन नराम्रो संग प्रभावित भएको छ । लगातार परेको अविरल बर्षाको कारण बीरगंज माहानगरपालिकाको बिभिन्न भाग लगायत ग्रामिण भेगहरु समेत डुवानमा परेको हो । अविरल बर्षाका कारण पर्साको ग्रामिण भेगहरुमा पोखरिया नगरपालिकाका सम्पुर्ण वडाहरु, पकाहामैनपुर गाउपालिका मसिहानी गाउपालिका, जगरनाथपुर गाउपालिका लगायतका गाउहरु डुवानमा परेकाछन ।
बीरगंज डुवानमा बीरगंज माहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अधिकारी, योजना प्रमुख अमात्य, परियोजना प्रमुख श्रेष्ठ, परियोजनाका लेखा प्रमुख श्रेष्ठ ठेकेदारको पैसामा चाईना उडे
बीरगंज २७ श्रावण लगातार परेको बर्षाका कारण बीरगंज डुवानमा परी रहदा बीरगंज माहानगरपालिका कार्यालयका कार्यकारी अधिकृत पिताम्बर अधिकारी, योजना प्रमुख प्रकाशमान सिंह अमात्य, परियोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ, परियोजनाका लेखा प्रमुख सुमन श्रेष्ठ परिवार सहित चाईना शयरमा गएको समाचार प्राप्त भएको छ ।
काठमाण्डौमा कसरी बन्दैछ कोटेश्वर–कलंकी चक्रपथ
काठमाडौं, २७ साउन । काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी सडक विस्तारको काम भएको छ । तर, सडक विस्तार व्यवस्थित हुन सकेको छैन । विस्तारका लागि काम सुरु भएको धेरै सडक अस्तव्यस्त छन् । सडक विस्तार आयोजनाहरु लथालिङ्ग छन् । सार्क सम्मेलनलाई लक्षित गरि तीनकुने–मातइतीघर सडकलाई चिरिच्याट बनाइए पनि अन्य सडकको हालत खराब छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले एक जना लागु औषध सहित पक्राउ
काठमाडौं २६ श्रावण सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले काठमाण्डौबाट एक जनालाई लागु औषध सहित पक्राउ गरेको । भैरहवाबाट काठमाडौं तर्फ आउँदै गरेको लु. १ ख ८७६७ नम्बरको यात्रुवाहक बसलाई चेक जाँचको क्रममा रुपन्देही जिल्लाको सिद्धार्थनगर नगरपालिका १ बस्ने १७ वर्षिय प्रतिप गुप्तालाइ बिशेष चेक जाँचको क्रममा काठमाण्डौको नागढुंगाबाट बिहिवार पक्राउ गरेको हो ।
हात्तीको आक्रमणमा बालकको मृत्यु
पर्सा, २६ साउन । पर्साको सुवर्णपुर गाउँपालिकामा आज बिहान हात्तीको आक्रमणमा परी एक बालकको मृत्यु भएको छ । पर्साको राष्ट्रिय वनबाट आएको हात्तीको समूहले गरेको आक्रमणमा परी वडा नं २ इक्षानगर निवासी रामकुमार प्रजाको ११ वर्षीय छोरा रिजन प्रजाको मृत्यु भएको हो । बिहान ३ः३० बजेको सयममा वनबाट आएको हात्तीको समूहले प्रजाको घरमा आक्रमण गरी छोरालाई घरभन्दा २५ मिटर वनतर्फ लगी कुल्चलेर मारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
महोत्तरी, २४ साउन । ललाइफकाई बालिका बलात्कार गर्ने एकजना शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले एक १४ वर्षीया बालिकालाई भारतमा लगी बलात्कार गरेको आरोपमा महोत्तरी औरही गाउँपालिका–१ का २८ वर्षीय शिक्षक प्रमोद महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । गत साउन १७ गते शिक्षकले ती युवतीलाई भगाएर भारतको सीतामढी लगी बन्धक बनाई बलात्कार गरेको आरोपमा महतोलाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ । औरहीकै स्थानीयबासी १४ वर्षीया बालिकालाई बन्धक बनाएर आरोपी शिक्षक महतोले केही दिनदेखि बलात्कार गर्दै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
ललितपुरमा प्रहरीको ‘इन्काउन्टर’मा एकको मृत्यु
काठमाडौ, २३ साउन । ललितपुरको कुसुन्ती स्थित अरुण वस्तीमा सोमबार गोली चलेपछि एकको मृत्यु भएको छ । लागूऔषध कारोबारमा संलग्न रहेका प्रवीण खत्रीसँग हतियार रहेको सुराकीका आधारमा महानगरीय अपराध महाशाखाको टोली उनको घरमा पुगेको थियो । तर, प्रहरीलाई देख्नासाथ उनले गोली चलाएको र प्रहरी टोलीले जवाफी कारबाही गरेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी दिनेश अमात्यले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक बानियाबाट तालिम समापनः–
सुर्खेत, मध्य पश्चिम क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी सुर्खेतमा संचालित सि.सं. २२८ सीमा सुरक्षा तथा भन्सार गस्ती तालिम सम्पन्न भएको छ । उक्त तालिमको साउन २२ गते सो बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक बसन्त कुमार बानियाले समापन गर्नुका साथै तालिमका उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरुलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो । सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक बानियाले सो अवसरमा प्राप्त म्याण्डेट बमोजिमको जिम्मेवारीलाई व्यावसायिक तवरबाट पुरागर्न सधैं लागिरहनुपर्ने बताउनुभयो ।